Dowladda Itoobiya oo lagu dacweeynayo internetka ay jartay | Saxil News Network
Dowladda Itoobiya oo lagu dacweeynayo internetka ay jartay
Lahaanshaha sawirkaULLSTEIN BILD
Image captionAstaan muujineysa adeeg interneet oo xidhan
Koox sharci yaqaanna ah ayaa sheegay iney qorsheynayaan iney dacwad ku saabsan adeegga Interneetka ee ay jartay muddo siddeed maalmood ah ay ku soo oogayaan shirkadda adeegga isgaarsiinta Itoobiya bixisa ee Ethio-Telecom.
Adegga internet-ka ayaa dalka Itoobiya ka maqan siddeed maalmood taasoo saameysay dalka oo dhan, shirkadda Ethio-Telecom illaa iyo hadda wax faahfaahin ah kama bixin.
Sharciyaqaannadu waxay ku doodayaan internet-ka la jaray inuu yahay xadgudub loo geystay xuquuqda dastuuriga ee ay muwaddiniinta dalka Itoobiya u lahaayeen iney xogta dalkooda iyo caalamkaba lasocdaan.
Adeegga interneetka wuxuu Talaadadi hore marki ugu horreysay uu ka jarmay caasimadda Addis Ababa, kaddibna wuxuu u sii gudbay dalka oo dhan.
Shirkad Ethio-Telecom oo bixisa adeegga keli ah isgaarsiinta dalka Itoobiya ilaa iyo hadda wax faahfaahin ah kama bixin sababta keentay interneetka inuu hawada ka baxo.
Hase yeeshee, dadka qaar ayaa aaminsan in interneetka loo jaray si ay dowladda uga hortagto qishka imtixaanaadka ee bixi lahaa ama interneetka lagu baahin lahaa.
Yohannes Enyew, oo ka mid ah sharci yaqaannada dacwadda ku soo oogaya shirkadda Ethio-telecom ayaa sheegay in dacwaddaasi la soo afjaro ay qaadan karto bilooyin.
“Waxaanna dooneynaa inaan shacabka ku wacyigelinno sida ay suurtagalka ugu tahay iney sameeystaan shirkado isgaarsiin oo dowladda ka madax bannaan iney sameystaan” ayuuna sii raaciyey.
Image captionDawladda ayaa xaqiijisay in khadka Internerku uusan shaqaynaynin
“Haddii dacwadda aan ethio-telecom ku soo oogeyno aan ku guul darreysannana ugu yaraan waxaan shirkadda kaga guuleysaneynaa qasaaraha interneetka la jaray ka yimid iney bixiso.”
Koox khubara ah oo arrimaha isgaarsiinta iyo dakhliyada ay helaan u kuur gala oo lagu magacaabo Netblocks waxay sheegeen adeegga interneetka oo hal maalin ka maqnaado iney shirkadda keli ah ee adeegga isgaarsiinta bixiso ee Ethio-Telecom ay maalinti khasaareyso 4.5 milyan oo doolar.
Sideeddi maalmood uu adeegga Interneetka maqnaana waxay cecelis ahaan shirkadda Ethio-Telecom qasaartay ku dhawaad 36 milyan oo doolar (30 milyan oo birr).
Ethio-Telecom waa shirkadda keli ah ee adeegga Isgaarsiinta ka bixiso dalka Itoobiya waxaana shirkaddaasi iskaleh dowladda Itoobiya.
Sharciyaqaannada oo intooda badan jaamacadaha dalka culuunta sharciga ka dhiga waxaa kale oo ay sheegeen iney ardaydooda ay maalmihi u dambeeyey uu maqnaa adeegga interneetka ay saameysay akhriskooda la xiriira khadka.
Fikrad ganacsi ayuu ku iftiimiyay miyiga Soomaaliya, habka uu uga macaasho-na waa cajiib
Itoobiya oo jartay Internetka si aan imtixaannada loo qishin
Madaxa xafiiska maareeyaha guud ee Ethio-Telecom Charar Aklilu oo BBC u warrantay waxay sheegtay “iney ka warhayso oo keli saacada kooban cillad ay ogtahay inuu khadka u jarmay balse ay garaneyn sababta keentay inuu maalmo hawada ka maqnaado.”
Haddaba adeegga interneetka yaa jaray?
Sida ay dadka qaar aaminsan yihiin waxaa sanadkan imtixaanaadka dugsiyada sare u fadhiistay in kabadan 1.2 milyan oo arday ma laga yaabaa in loo jaray qishka imtixaanaadka si looga hortago?
Agaasimaha guud ee wakaaladda imtixaanaadka Araya Gabra-Igzaber oo BBC u warramay wuxuu sheegay ineysan wakaaladdu cidna ka codsan in adeegga interneetka laga jaro.
“Isaga oo qoslayana wuxuu yiri inaan shirkadda la hadalno oo aan dhahno naga jara interneetka?…awood noocaasi ma lihin annagu.”
Lahaanshaha sawirkaETHIO-TELECOM FACEBOOK
Haddana waxay BBc la xiriirtay wasaaradda waxbarashada iney amar noiocaasi bixisay? Hargwa Mamo oo ah madaxa xiriirka dadweynaha wasaaradda waxbarashada iyo saayniska iyo teknooloojiyadda ayaan weydiinnay bal iney arrintan wax ka ogtahay iyo inkale?
“Arrintaasi wax xog ah kama hayo adeegga interneetka la jaray iyo imtixaanaadka dugsiga sare ee dalka ka socda ma aaminsani iney wax xiriir ah ka dhaxeeyaan” ayey tiri.
“Ilaa iyo haddana Interneetka ayaa iga jarmay shirkad leh mooyee anaa damiyey cid leh ma aanan la kulmin” ayey sii raacisay.
BBC waxay uga sii gudubtay xafiiska ra’isal wasaaraha inuu arrintan amar ka bixiyey inkale si ay u ogaato.
Ms Helen Yuusuf oo ka mid ah waaxda warbaahinta ee ra’isal wasaaraha ayaa sheegtay xafiiskannaga uma xilsaarni iney wax walbo jawaab ka bixiso, soo kama habboona inaad weydiisaan cidda ay arrintan quseyso oo ah shirkadda Ethio Telecom, sua’aashi ay BBC weydiisay waxay Ms Helen kaga jawaabtay su’aal.”
Shirkadda Ethio-Telecom oo farta lagu soo wada fiiqay marki ay BBC ku noqotay waxay mas’uuliyiinta shirkaddu sheegeen iney haynin jawaabti ay horay u bixiyeen mid ka duwan.
Sheekadi halkaasi ayey ku xirantay iyada oo aan jawaab loo helin cidda ka mas’uulka ah iyo cidda jartay adeegga Interneetka ee dalka Itoobiya